Maminitsi makumi matatu Ekunyengeterera Ekununurwa kwemhuri | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Pfungwa dzeMunamato wekununurwa kwemhuri
Pfungwa dzeMunamato wekununurwa kwemhuri
Mabasa 16: 31
Ivo ndokuti: Tenda kuna She Jesu Kristu, uye uchaponeswa, nemhuri yako.
Hapana mhuri pasi pano iyo isingatambure kupokana kana imwe. Sezvineiwo, iyo institution inonzi mhuri ndiyo inorwiswa zvakanyanya pasi pano. Mhuri pasi rose dziri muhusungwa nekudzvinyirirwa muchimiro chehurombo, wanano ine matambudziko, kutadza pamucheto webudiriro, uye kufa kusati kwasvika. Vanodiwa vadikani, chinangwa cheminamato iyi yekununura mhuri ndeyekukumbira moto kuzorwa nenhare dzese, maaritari ese asingazivikanwe uye murume wese akasimba akakutapa iwe nemhuri yako senhapwa uye nenzira iyo Mwari yaakanunura nayo vana veIsraeri kubva kuna Farao nehondo dzake, mushure meminamato iyi Mwari anonunura mhuri yako nekumhanya kwemheni: kana uchingotenda iwe.
Mhuri dzose dzinokunda imhuri inonamatira, uye mhuri yega yega inonamatira haigoni kuve munyatwa wechidhimoni. Sevatendi, tinofanirwa kunzwisisa kuti kana tichikoka Mwari mumhuri medu, tinokunda matambudziko ese anouya kwatiri, chinangwa cheiyi minamato yekununurwa kwemhuri ndechokudzorera Mwari kumhuri dzedu, ndechekudzikisa huvepo Mwari mumhuri medu. Kana huvepo hwaMwari huchionekwa mumhuri, gomo rega rega rakamira pamberi pemhuri iyi rinofambiswa. Joko roga roga ra satanic rinotyorwa uye munhu wese akasungwa nadhiabhori anosunungurwa muzita raJesu. Munyengetero wangu kwauri nhasi ndouyu; paunonamata iyi minamato yekununurwa kwemhuri nhasi, iwe nemhuri yako muchanunurwa muzita raJesu. Namata iyi minamato nekutenda nhasi uye ugashire yako kununurwa. Mwari vakukomborere.
1. Baba muzita raJesu ndinokutendai neruponeso rwemweya wangu nhasi.
2. Baba muzita raJesu ndinokutendai nekuti ndisati ndataura munamato uyu unongedzera mhuri yangu watondinzwa kare.
3. Baba muzita raJesu ndinokutendai nekurwa nekukunda hondo dzangu pamuchinjiko weKarivhari.
4. Ini ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwega wega mudzinza rangu.
5. Moto waMwari mupenyu, sewe, wakaburukira pamazuva aEria, unopedza huwandu hwehurombo, kupindwa muropa, kudzvinyirira, uye kudzikisira muhupenyu hwangu nhasi. 1kings 18:38
6. Holy ghost moto, kungofanana nemazuva aErisha anotumira pasi mhuka dzisinganzwisisike kunodya wese mumiririri akachengeta mari yangu uye mari yemhuri yangu. 2 Madzimambo 2: 23-24
7. Baba vekudenga, kungofanana nengirozi yakakungurutsa ibwe kubva paguva raJesu, mutumwa wangu ngaakungure dombo roga roga richitsvagira mugumo wemhuri yangu neni muguva. Mateu 28: 2.
8. Ini ndinosunungura nyonganiso nekuparadza mumusasa wevakabirwa zvese zvemhuri yangu nhasi.
9. Baba vekudenga segungwa rakavhurika nekumedza vavengi vevanhu vako avo vakavabata senhapwa kwemakore. Rega gungwa rimedze mweya yemadzitateguru ese anga akasunga mhuri yangu chisungo.
10. Rega ruoko rune simba rwaMwari rwakatyora ngetani dzaPaul naSilas mutirongo vhure tambo yega yega ichindibatanidza neyangu yekare uye ichinditadzisa kubva mune ramangwana rakarongerwa Mwari nemhuri yangu neni. Mabasa 16: 25-34.
11. Baba Vekudenga, sezvamakanunura Danieri nevana vatatu vechiHebheru kubva mumaoko evanodzvinyirira, mununure mhuri yangu neni kubva muuranda hwehurombo, kushungurudzika, uye kutadza. Danieri 6: 1-28.
12. Ballistic zvidhori kubva kunzvimbo dzekudenga dzinotanga kuputira chero coven ipo kubwinya kwemhuri yangu kuri kuvanzwa.
13. Sporadic makomba anotanga kuwira pane yega yega chengetedzo yemhuri yangu painenge ichichengetwa.
14. Rega hwamanda kubva kudenga dzisarere nzeve dzevanondibata kuitira kuti vaburitse mhuri yangu neni pasina kunonoka
15. Sekutaura kwangu munamato uyu unonongedzera mhuri, ndinoraira varidzi vekudenga kuti vatange kusunungura nhengo yega yega yemhuri yanga yakasungirirwa pamuti wekutadza.
16. Sezvo ini ndichinamata iyi minamato yemhuri mhuri dzirege kutanga kutanga kubva mumaoko evana vangu, murume wangu, mukadzi, vabereki, hama muzita rakasimba raJesu.
17. Sezvo ini ndinonamata iyi munamato inonongedzera mhuri, nekuti ndiri mwanakomana / mwanasikana waAbrahama, akabatana nembeu yaDhavhiti, zvese zvandakarasika nezvose zvakatorwa kwandiri zvisunungurwe, nekudzoswazve muzvikamu zviviri . Ruka 13:16.
18. Moto waMwari mupenyu, semiwe, wakapedza Sodhoma neGomora, unopedza vatapi vehupenyu hwangu hwekuroora apo ini ndinonamata iyi minamato yemhuri. Genesi 19: 24.
19. Sezvo guva rakatadza kubata Razaro nekurira kwezwi raJesu. Nekuti ini ndiri mudyi wenhaka pamwe naKristu, apo ini ndinonamata munamato uyu unongedzera wemhuri rega guva liburitse zvese zvanga zvakadzivirira kubva kumhuri yangu. Johani 11: 38-44
20. Ngakuve nekudengenyeka kwenyika kusinganzwisisike uye madambudzo ayo anozunza nheyo dzekuti kubudirira kwemhuri yangu kwakachengetwa apo ini ndichinamata iyi minamato yemhuri.
21. Nekuti hapana chakanyanya kuomesera ishe wandinoshandira, ndinoparidza kuti kubva nhasi, zvese zvisingagone kuitika zvakabatana nemhuri yangu zvinoparara muzita rakasimba raJesu. Jeremia 32:27.
22. Ini ndinoraira vatumwa vandakagoverwa kuti ndisunge urefu nekureba kwepasi uye ndisunungure hupfumi hwese hune zita remhuri yangu pariri uye ndiunise kwandiri nhasi. Mapisarema91: 11.
23. Nhasi, ini nemhuri yangu tinonunurwa kubva pamusungo weanowona uye nedenda roga roga rakaipa. Pisarema 91: 3.
24. Gore rino murume wese akasimba kubva pamba pababa vangu kana mukadzi wese akasimba kubva kudivi raamai vangu avo vakandivharira mumba yekutadza kuvhura masuwo uye ndinyadziswe muzita raJesu. Mateu 12:29.
25. Chimvuramabwe nemoto wemusoro unotanga kuwira pane imwe neimwe philistine yakabata, ikatambudza, nekubvisa mari yevabatsiri vangu nhasi. Joshua 10:11
26. Nekuti Jesu, muponesi wangu, uye ishe, akamutswa uye akanunurwa kubva mukubatwa kwerufu mushure memazuva matatu. Ini ndinotema kuti mukati memazuva matatu, mhuri yangu neni tinonunurwa kubva kumweya yega yega inoshamisa yerufu, ichishungurudza uye ichitambudza mhuri yangu.1VaKhorinte 15: 4.
27. Chero simba renyika rekunonoka iro rinoita basa rekubatanidza mhuri yangu neni kune imwe nzvimbo, nekudaro rinotidzivirira kuti tisimudzirwe nekusimudzwa, matenga kubva kudenga ngavaaparadze muzita raJesu.
28. Rega miseve kubva kuna Mwari itange kuuraya vanochengeta vese zvisingazivikanwe calabash, zvichikonzera kushaya vana mumhuri yangu.
"Muzita raJesu, hutongi hwese nemasimba ngazvimire munzira yekubudirira kwangu, hupfumi, uye masimba emari gore rino ngavaparadzwe uye nekunyadziswa.
30. Rega zvidhori zvinokanganisa zvishanyire musasa we chero murume asingazivikanwe kana mukadzi asingazivikanwe uyo akabata moyo yemurume / mukadzi / vana uye ngavarege kusungwa necheni imwecheteyo yakasungwa neyemhuri yangu.
Baba ndinokutendai nekuti sezvamataura munyika menyu, kuti kana ndikabvunza chinhu muzita renyu, chichaitwa. Ndatenda nekuti mapindura minamato yese yemhuri. Namatai zita renyu guru.
Previous nyayaPfungwa dzeMunamato Yekukunda kweMweya
inoteveraPfungwa dzeminamato yenyasha neTsitsi
Wisdomman Banda Kurume 5, 2020 At 4:18 pm
Ini ndakakomborerwa kwazvo nekuda kwezaruriro dzako dzakadzama dzauri kupihwa naMwari Ndakaverenga dzinoverengeka dzekunyora kumusoro uye ndakafunga kuti ndinofanira kudaidzira - 'Ameni!'
Wisdomman Banda Kurume 5, 2020 At 4:20 pm
Ini ndinobva kuLusaka Zambia
yemoi Kenneth Chivabvu 3, 2020 Na7: 04 am
Roland James June 1, 2020 Pa 7: 42 am
Kutenda kune minamato yenongedzo changamire
Margarita Valdez Gumiguru 19, 2020 Na10: 46 pm
Anonamata Anonamata, Baba muzita raJesu ndinokutendai netsitsi dzenyu uye nemhinduro kuminamato yangu.
Nambula Muliyunda Ndira 29, 2021 At 11:57 am
Yakanyanya simba ndaingoda yandaida pakununurwa kwangu pane chero nzira yandinogona kusangana newe munhu waMwari ndinobva kuZambia
Innocent Akpan. Kukadzi 1, 2021 At 11:03 am
Ndakanamata minamato iyi ndine tariro izere nevimbiso ndichitenda kuti Ishe Mwari vandisunungura uye nemhuri yangu kubwinya kuzita rake dzvene Amen. Ndinokutendai mufundisi nemunamato uno acidic unonongedza dzimwe nyasha kwamuri muzita raJesu Amen.
Judie Kurume 5, 2021 At 4:54 pm
Ndinonamata Mwari pindurai minamato yangu amen
Éric Chivabvu 21, 2021 nenguva dza 11:58 pm
Marian June 1, 2021 Pa 9: 28 am
MWARI VAKUKOMBORESE PASTOR IKE
Alusomom Chikumi 26, 2021 Panguva ya4: 36 pm
Ndatenda mufundisi maprayer points ari kubata
Evang Patrick Dozie Chikumi 29, 2021 Panguva ya7: 38 pm
Muri kuita zvakanaka changamire! Ramba wakaropafadzwa
Minamato Yekushinga Uye Kutungamira
Kunamata Kunongedzera Kudzvinyirirwa
MAPISAREMA 3 Kunyengeterera Rubatsiro